Ferguson Oo Ku Tilmaamay Kaarka Cas Ee Loo Taagay Ivanovic In Uu Sabab U Ahaa Guushii Ay Ka Gaareen Chelsea - jornalizem
Ferguson Oo Ku Tilmaamay Kaarka Cas Ee Loo Taagay Ivanovic In Uu Sabab U Ahaa Guushii Ay Ka Gaareen Chelsea
Sir Alex Ferguson ayaa sheegay in Manchester United kulankii ay la yeesheen Chelsea ay natiijadeedu dhinac kasta u dhici kartay ka hor inta aanan laga saarin ciyaarta daafaca Chelsea ee Branislav Ivanovic.
Kooxda Shayaadiinta cas cas ayaa 3-2 waxa ay ku badiyeen Stamford Bridge, markii uu kursiga keydka ka soo kacay Javier Hernandez uuna u dhaliyey goolka guusha kadib markii Ivanovic iyo Fernando Torres laga saaray ciyaarta.
Ferguson ayaa ku tilmaamay ka saarida ciyaarta ee daafaca midig ee Chelsea uu ahaa fure guushoodii taasoo keentay in ay hal dhibic uun ka hooseeyaan kooxda Chelsea oo haysa hogaanka Premier League.
Iyadoo la weydiiyey Ferguson in kulanka uu noqon karay in labadaba kooxba ay fursad u helaan inay guusha raacdo ayuu u sheegay Sky Sport:”Haa taasi shaki kuma jirin.
“Waxaan ku bilaabanay ciyaarta si wanaagsan balse markii toban daqiiqo ay ka dhineyd qeybtii hore ee ciyaarta hoos u dhac ayaa naga muuqday. Runtiina waxay nagu ahayd mid aan dhararno in qeybta hore ee ciyaarta ay dhamaato.
“Waxaan u malaynayaa ka saaristii ciyaarta ee Ivanovic inay fure u ahayd guusheena.
“Waxaan soo geliney Chicharito dabcan wuxuu keenay goolkii guusha. Waxaan u malaynayaa in nasiibka uu inaga nala jirey.”
Ferguson ayaa qirey in nasiibka uu qeyb ka ahaa guusha ciyaarta kadib markii goolkii guusha ee uu dhaliyeya Hernandez uu u muuqday mid offside ahaa. Wuxuuna yiri Alex: “Waxay sheegayaan in goolkii guusha uu ahaan karay offside, taasi waa nasiib uun oo aan helnay.”
Tababaraha Man United ayaan u arkin wax dhibaato ah ka saaridii ciyaarta Torres ee khilaafka ka dhashay kadib markii loo taagay kaarkii labaad ee hurdiga ahaa kadib markii uu garsooraha uu xukmiyey in uu is tuuray Torres.
“Waxaan u malaynayaa in uu dhulka ku dhacay. Waxaana aan filayaa in Jonny uu wax yar taabtay,”ayuu sii raaciyey Ferguson.
“Laakiin wuu sii socon karay, taasoo uu samayn karay balse wuxuu doortay in uu is rido.
“Wuu sii socon karay goolna dhalin karay,taasi waa waxa aan fahamsanahay aniga. Horena kaarka hurdiga ah ayuu u qabay waxay ahayd qalad uu iska lahaa Torres.”
9/11/2014 04:51:48 pm